६.२ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पमा ७ जनाको मृ’त्यु – Sandesh Press
६.२ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पमा ७ जनाको मृ’त्यु
January 15, 2021 112
इन्डोनेशियामा गएको भू’कम्पमा सात जनाको ज्या’न गएको छ । कयौँ घा’इते भएका छन् । बिहान सुलावेसी द्वीपमा ६ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भू’कम्प गएको हो ।
भूक’म्पपछि विज्ञले श’क्तिशाली पराकम्प आउन सक्ने चेतावनी दिएका बीबीसीले जनाएको छ । भू’कम्पका कारण घर तथा अस्पताल भ’त्किँदा कयौं नागरिक फसेका छन् । भूक’म्पपछि सयौँ नागरिक वि’स्थापित भएका छन् ।
काठमाण्डौ । मोबाइल फोनमा वि स्फोट हुँदा एक १४ वर्षीया किशोरीको मृत्यु भएको छ । मृतक युवतीले आफ्नो फोन चार्जमा राखेर सिरानीमा राखेकी थिइन् । उनी सुतिरहेको अवस्थामा फोन अचानक वि स्फोट भएको हो । यो घटना काजकिस्तानको बास्तोबको हो । डेली मेलको रिपोर्टअनुसार १४ वर्षीया अलुआ एसेटकिजी गीत सुन्दै सुतेकी उनको शव भोलिपल्ट ओच्छ्यानमा थियो ।
वि स्फोट भएको फोनले उनको टाउकोमा चो ट लागेको उनको मृत्यु भएको हुनसक्छ । स्थानीय मिडियाका किशोरीको फोन बढी तातेकोले वि स्फोट भएको हो । अहिलेसम्म वि स्फोट भएको स्मार्टफोनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यस्तै भारतको आन्ध्रप्रदेशमा मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा मोबाइल वि स्फोट हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ । चांगु मस्तान रेड्डी नाम गरेका ३१ वर्षीय व्यक्तिले मोबाइल चार्ज गरिरहेकै समयमा फोनमा कुरा गरिरहेका थिए । अचानक ‘हाइ भोल्टेज’ का कारण मोबाइल वि स्फोट हुँदा उनी ग म्भिर घाइते भएका थिए ।
दुर्घटना हुँदा रेड्डी आफ्नो घरमा एक्लै भएको प्रहरीले जनाएको छ । छिमेकीले तार ज’लेको गन्ध पाएपछि उनको कोठामा पुग्दा रेड्डी अचेत अवस्थामा ढलेका थिए ।
उनलाई छिमेकीले नै अस्पताल लगेका थिए । तर अस्पताल प्र्याउँदा उनीको मृत्यु भइसकेको चिकित्सकले बताएका थिए । मोबाइल फोन पूर्ण रुपमा ज’लेका कारण कुन कम्पनीको मोबाइल हो भन्नेसमेत प्रष्ट हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevनेपालको सगरमाथालाई भारतको दाबी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
Nextओच्छ्यानमा राखिएको मोबाइल पड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृत्यु
बुवाको कि’रिया बसेको बेला पनि यी बिद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल भए
एकाबिहानै श्री देबघाटको दर्शन गरी भेटी स्वरूप यक शेयर गर्दै पढ्नुहोस् आज पुष १९ गते आइतबारको राशिफल
मृत्यु भएर घर लगिसकेका दुई महिने शिशुमा कोरोना पुष्टि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको कोरोना खोप कुन देशको? भारत, अमेरीका, बेलायत र अष्ट्रेलियाका राजदूतले गरे यस्तो दावी, नेपालका स्वास्थ्य विज्ञ नै चकित